Sida loo dhoofiyo iCloud Xiriirada in Outlook
> Resource > iCloud > Sida loo dhoofiyo iCloud Xiriirada in Outlook
Sidaas, waxaad leedahay farabadan ee xiriirka la badbaadiyey in iCloud, oo hadda aad u jeclaan lahaa in aan u dhoofin in aad Muuqaalka? Sida caadiga ah, waxaa lagula talinayaa in aad dhoofin xiriirada iCloud in file vCard ah, oo ka dibna soo dhoofsadaan in Outlook.It si waqti lumis. Hadda, aad uma baahna in ay sameeyaan in mar dambe. Halkii, waxaad si fudud u dhoofin karaan xiriirada iCloud in Outlook iyadoo la kaashanayo Wondershare TunesGo (Windows).
Waa qalab cid saddexaad, aad ugu suurtogasho inay u dhoofiyaan xiriirada in iCloud, Yahoo, Exchange iyo xisaab badan si ay hal ama dhowr ah file vCard ah (s), Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail iyo Windows Address Kitaabka. Hadda, download qalab ay u guuraan xiriirada ka iCloud in Outlook.
Fiiro gaar ah: Si aad u gudbiyaan xiriirada iCould in Outlook la TunesGo, waa inaad marka hore la saxiixato account iCloud aad iPhone hore. The 6s iPhone dambeeyay (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s / 5c, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4s iyo iPhone 3GS macruufka orodka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5 buuxda oo ay taageerayaan this qalab.
Hab fudud inay u dhoofiyaan xiriirada ka iCloud in Outlook
Hagaha hoos ku qoran wuxuu kuu sheegayaa sida loo isticmaalo TunesGo inay u dhoofiyaan oo dhan ama soo xulay xiriirada iCloud in Outlook si fudud oo ku haboon. Hadda, aad iska baarto.
Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo aad kombuutarka. Markaas, waxaad ka heli suuqa kala xiriir ah TunesGo ah.
First of dhan, xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah. Ka dib markii la ogaado by TunesGo, aad iPhone muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose. By gujinaya tab kasta oo ku galeeysid bidix, waxaad ka eegi kartaa xog ku saabsan iPhone.
Tallaabada 2. Aayad in iCloud xiriirada aad iPhone
On aad iPhone, ka jaftaa "Settings". On dejinta screen, ka jaftaa "iCloud". Markaas, saxiixo in aad iCloud 's user account iyo code.
Tallaabada 3. xiriirada Transfer ka iCloud in Outlook
In galeeysid bidix, guji "Xiriirada". In Xiriirada category, waxaad ka arki kartaa xiriirada badbaadiyey on xasuusta telefoonka, iCloud, Yahoo, Exchange, iwm Riix group iCloud. Dhammaan xiriirada in iCloud waxaa lagu soo bandhigaa in ay leeg- saxda ah.
Dooro dhammaan xiriirada ama ay doortaan xiriirada aad doonayay. Markaas, guji "Import / Dhoofinta". In menu hoos-hoos, doortaan "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay". Markaas, dooro "in Outlook Express" ama "in Outlook 2003/2007/2010/2013". Ka dib markii in, TunesGo bilaabo in aad nuqulka xiriir ka iCloud in Outlook. Just hubi iPhone ku xiran waqtiga oo dhan.
Sameeyey! Waxaad si guul wareejiyo xiriirada iCloud in Outlook. Sida aad ka arki, waa wax fudud oo caynkaas ah inay ka sameeyaan marka aad caawimaad ka heli TunesGo. Waa maxay sababta isku day in aadan qalab fiican si ay leeyihiin isku day ah oo adiga kuu gaar ah?
Sida loo hagaagsan iCloud Calendar on Phone Android oo Tablet